၁၂၇၄ ခုနှစ် ဂျပန်၊ မွန်ဂိုစစ်သမိုင်းထဲက သေရွာပြန်စစ်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကလဲ့စား Ghost Of Tsushima
date_range 11 December 2017
visibility 18020 Views
၁၂၇၄ ခုနှစ်ကနေ ၁၂၈၁ ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်၊ မွန်ဂိုစစ်သမိုင်းကြောင်းကို အားလုံးတစ်စွန်းတစလောက်တော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာတွေ၊ လက်နက်တွေ မဖွံဖြိုးခင်ကတည်းက ခွန်အားကြီးမားလှတဲ့မွန်ဂိုစစ်တပ်တွေဟာ တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ မော်ဒန်ဆန်တဲ့စစ်လက်နက်တွေကို အသုံးချနေကြပါပြီ။ မြေအောက်ဗုံးတွေ၊ မီးကျည်အမြောက်ဆံတွေ၊ အစရှိတဲ့အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားလှတဲ့ စစ်လက်နက်တွေအပါအဝင် ရဲရင့်ပြီးကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်သည်တွေနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ မွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးရဲ့အရှိန်အဝါဟာ ၁၂ ကနေ ၁၃ ရာစုဝန်းကျင်တဝိုက်အထိ မငြှိမ်းနိုင်တဲ့တောမီးကြီးလို ကမ္ဘာ့တစ်ဝိုက်မှာကျယ်ပြန့်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။
မွန်ဂိုအင်ပါယာရွှေခေတ်ကမ္ဘာ့စစ်သမိုင်းမှာ မွန်ဂိုတွေရဲ့နယ်မြေအုပ်စိုးထားနိုင်မှုဟာ အဆင့် ၂ ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့မြေဧရိယာတစ်လုံးရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ မွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးရဲ့အင်အားကြီးမားမှုကိုမြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် မွန်ဂိုတွေရဲ့အင်အားကြီးမားမှုဟာ ၁၂၂၇ ခုနှစ်မှာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကနေ ကတ်စ်ပီယင်ပင်လယ် (ပင်လယ်နက်) အထိ နယ်မြေတောက်လျှောက်ကို စစ်အင်အားနဲ့အုပ်စိုးထားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီအတိုင်းအတာပမာဏဟာ ရိုမန်အင်ယာပါနဲ့ မူစလင်စော်ဘွားတွေထက် နှစ်ဆကြီးမားပါတယ်။
တစ်ချိန်ကမွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးဟာ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ တိဘက်၊ အိန္ဒိယနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကို ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိမ်းပိုက်အုပ်ချူပ်ခဲ့သလို ဥရောပတိုက်နဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများအထိပါ ထိုးဖောက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အထိ အင်အားကြီးမားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၃ ရာစုမှာဥရောပတိုက်နိုင်ငံများဟာလည်း အထိုက်အလျောက်အင်အားကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မွန်ဂိုအင်ပါယာအနေနဲ့ အရှေ့တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးနီးပါးကိုအုပ်စိုးထားတဲ့အပြင် ဥရောပတိုက်အလယ်ပိုင်း အထိတောက်လျှောက်ထိုးဖောက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။
အဲဒီလို ၁၃ ရာစုဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ရဲ့ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုတိုင်းမှာ အောင်ပွဲဆက်တိုက်ခံလာခဲ့တဲ့မွန်ဂိုတွေဟာ ၁၂၇၄ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်ပြည်၊ ဆူရှီမာကျွန်းစုကို ကျူးကျော်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂၇၄ ခုနှစ်မှာတစ်ခါ၊ ၁၂၈၁ ခုနှစ်မှာတစ်ခါ၊ မွန်ဂိုတွေရဲ့ဂျပန်ပြည်ကျူးကျော်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေဟာ လုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုဒီ Ghost Of Tsushima ဂိမ်းဟာ အဲဒီကာလတစ်ဝိုက်က စစ်သမိုင်းပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ သေရွာပြန်ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ရဲ့ကလဲ့စားကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Ghost Of Tsushima ဂိမ်းဟာ ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းဖြစ်မလဲ? ဘယ်လောက်တောင်မှသမိုင်းကြောင်းကိုထင်ဟပ်မလဲ? စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ သိရှိရသလောက်ကို ဒီကနေပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
၁၂၇၄ ခုနှစ် ဂျပန်ဆူရှီမာကျွန်းကို မွန်ဂိုတပ်တွေရဲ့ ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်မှု
ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်အိမ်ကို ၁၃ ရာစုမှာတည်ထားတာဖြစ်ပြီး ၁၃ ရာစုဟာအနောက်တိုင်းမှာတော့ Medieval Period ကာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလမှာ မွန်ဂိုအင်ပါယာဟာ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝိုက်ကနိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်မြေတွေအားလုံးကို အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ ဂျပန်ပြည်၊ ဆူရှီမာကျွန်းကို မွန်ဂိုတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာ ၁၂၇၄ ခုနှစ်မှာတစ်ခါ၊ ၁၂၈၁ ခုနှစ်မှာတစ်ခါဖြစ်ပွားခဲ့ပေမယ့် Kamikaze ဆိုတဲ့ လေမုန်တိုင်းတွေကြောင့် သင်္ဘောတွေတပ်ပျက်ပြီး နှစ်ကြိမ်လုံးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး နတ်ဘုရားတွေ ဖန်တီးပေးတဲ့လေမုန်တိုင်း 'Kamikaze' ဆိုတဲ့ဝေါဟာရရဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတာပါ။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို ဒီဂိမ်းထဲမှာရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိတဲ့ သစ္စာတော်ခံဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂိမ်မာများက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝင်ရောက်လေ့လာပြီး ဆော့ကစားရမှာပါ။
မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ဂျပန်ခေတ်စနစ် (Feudal Japan) ကာလနဲ့ Open World ဂိမ်းစနစ်
ဂိမ်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဘာမှတိတိကျကျမသိရသေးပေမယ့် Sucker Punch ဂိမ်းကုမ္မဏီဟာ ဂိမ်မာများကြားမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အစပျိုးလာပါတယ်။ Feudal ဂျပန်ခေတ်မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်ပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာလည်း အဲတုန်းကမတည်ငြိမ်ဘဲ အမျိုးအနွယ်အလိုက် နန်းသိမ်းမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဆာမူရိုင်းဆိုတဲ့ ဂျပန်စစ်သူရဲကောင်းတွေကတော့ နိုင်ငံရေးထဲဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ဘဲ၊ နိုင်ငံထဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမယ့်ရန်သူတပ်တွေကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ခိုင်မာတဲ့သစ္စာတရားကိုစောင့်ထိန်းသူ စစ်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဟာ Open World ဖြစ်မယ်လို့သိရပြီး ထွေလာအရဆိုရင်တော့ မွန်ဂိုစစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဟာ ကျရှုံးနေတဲ့ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ကို အညံ့ခံခိုင်းနေတာပါ။ ဇာတ်ကြောင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာ လုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။
သေရွာပြန်စစ်သူရဲကောင်းအဖြစ် မွန်ဂိုတပ်တွေကိုကလဲ့စားချေမယ့် ဆာမူရိုင်း
စစ်အင်အားမမျှပဲအညံ့ခံလိုက်ရပေမယ့် ကျရှုံးနေတဲ့ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ဟာ ဘယ်သောအခါမှရန်သူကိုဦးညွှတ်ဒူးထောက်လေ့မရှိတာကို ထွေလာမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အဲဒီလိုဦးချိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သေရွာကနေပြန်လည်နိုးထလာပြီး အင်အားကြီးမားလှတဲ့မွန်ဂိုတပ်တွေကို တစ်ကိုယ်တည်း ဘယ်လိုမျိုးကလဲ့စားချေမလဲဆိုတာကို ဂိမ်မာများကို Sucker Punch က လှလှပပကြီး တင်ဆက်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ထွေလာအဆုံးပိုင်းမှာပြသထားတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုစနစ်တွေအရရော၊ ဖန်တီးထားမှုပုံစံ၊ လောကဝန်းကျင်အစရှိတာတွေဟာ အဲဒီခေတ်သမိုင်းကိုထပ်ဟပ်တဲ့အပြင် လုံးဝကိုရင်ခုန်စရာကြီးပါပဲ။ Ghost Of Tsushima ထွေလာကို Playstation ချန်နယ်ကတင်ထားတဲ့အတွက် PS4 exclusive ဂိမ်းလို့တော့ လောလောဆယ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းကစားပုံစံဖြစ်မလဲ? ဘယ်လိုမျိုးရန်သူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲ အစရှိတာတွေကိုတော့ လောလောဆယ်မှာ ဘာမှမပြောပြထားသေးပါဘူး။
စစ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်ထပ်ဟပ်မယ့် Ghost Of Tsushima ဂိမ်းနဲ့အနှစ်ချူပ်
Slyooper, Infamous အစရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ဂိမ်းတွေနောက်က ဖန်တီးရှင် Sucker Punch ဟာ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း Ghost Of Tsuhima ဂိမ်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့သိချင်စိတ်ကို နိုးဆွလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Sucker Punch က ထုတ်တဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က Infamous: First Light ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး အခုဒီတစ်ခါမှာတော့ ၂၀၁၇ အကုန်မှာ Ghost Of Tsushima ဂိမ်းကို Paris Game Week 2017 မှာ စတင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါ။ ထွေလာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လောက်တောင်မှ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မယ်၊ ဇာတ်ရှိန်တတ်မယ်၊ ဂိမ်းကစားပုံစံတွေရောထွေးထားမယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ထွေလာကတော့ စစ်သမိုင်းကြောင်းရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ ထွေလာကိုကြည့်နေရသလို ကြောက်ခမန်းလိလိပါ။ ကိုယ်ဟာစစ်မြေပြင်ထဲက ကျရှုံးခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ဂျပန်ပြည်ကိုကာကွယ်မဲ့စိတ်၊ ကျူးကျော်သူတွေကို ချေမှုန်းလိုတဲ့စိတ်၊ ကလဲ့စားချေလိုစိတ်တွေ ပြင်းပနေပြီး လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်အားပြင်းပမှုဘောင်ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့ သေရွာပြန်ဆာမူရိုင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပါ။
ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွေလာအပြင် ဘာကိုမှမသိရသေးတဲ့အတွက် ၂၀၁၈ နှစ်ရောက်မှသာ အတိအလင်းသိရမယ်လို့ ဂိမ်းပညာရှင်များကောက်ချက်ချကြပါတယ်။ ဒီတော့ Ghost Of Tsushima ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂိမ်မာတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်း ဖလှယ်လို့ရအောင်လို့ သိရှိရသမျှဂိမ်းအကြောင်းတွေကို ကမ္ဘာ့စစ်သမိုင်းကြောင်းဆက်စပ်ပြီး အချက်အလက်လေးတွေ ဒီကနေပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
Trusted Reviews Polygon
PC Games Gaming Related Ghost of Tsushima Samurai Mongols Mongol Empire Sucker Punch Productions